မိုးရွာထဲမှာ လိမ်းဆေးလေးတွေရောင်းနေတဲ့ အဖိုးအိုကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အိမ်ပြန်နိုင်အောင် ကူညီပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး - Myanmarload
လိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီဖေးမပေးနေတာတွေ့ရတာ မြင်ရသူအဖို့ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ.....
အခုလို ခေတ်ကာလတွေမကောင်းဘဲ စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အခြေခံလက်လုပ်လက်စားတွေအဖို့ စားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုတောင် အနိုင်နိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ အခုအလိုအခြေအနေမှာ ဝမ်းစာအတွက် ရုန်းကန်ရှာဖွေနေရတဲ့ အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာလည်း အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အခုလည်း စေတနာရှင် ပြည်သူတစ်ယောက်က လိမ်းဆေးလေးတွေလုပ်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ အဖိုးတစ်ယောက်ကို ကူညီခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Photo Credit : ArrPuu Tuu's Facebook Acc
ပြည်သူတစ်ယောက်က နေပူမရှောင် ၊မိုးရွာမရှောင်ဈေးရောင်းနေရတဲ့ အဖိုးဆီကနေ လိမ်းဆေးလေးတွေ ဝယ်ယူလိုက်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်လဲ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးက လိမ်းဆေးလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ယူပြီး လုပ်ရောင်းတာပါ။ မိုးတွေက ရွာနေလို့ ဘယ်သူ့မှလည်း မဝယ်ကြကြောင်းကို ပြောပြထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ “ ကျေးဇူးပါ သားရယ်...မိုးရွာနေတော့ ဘယ်သူမှ မဝယ်ကြဘူး။ သားလေးရယ်...တဗူးလောက် အားပေးပါလား..(အားကိုးတကြီး လှမ်းခေါ်တယ်)။ ဟုတ် အဖိုး...ဘာတွေ ရောင်းတုန်း? ?လိမ်းဆေးလေးတွေပါ သားရယ်... အဖိုး ကိုယ်တိုင် ယူပီ လုပ်ရောင်းတာပါ...တဗူးလောက် အားပေးပါလား ? ဟုတ်...ဘယ်လိုရောင်းတုန်း အဖိုး? တဗူး...500 Ks ပါ သားရေ...ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့က 1,000 Ks ပါ သားရေ … ဟုတ် အဖိုး...မိုးတွေရွာနေတာ တကိုယ်လုံးလဲ ရွဲနေရော ဟုတ်တယ်...မိုးရွာထဲ ရောင်းတာတောင် စျေးဦးမပေါက်ဘူး သားရယ် ဟုတ် အဖိုး...ဘယ်နှဗူး ရှိလဲ...အကုန်ယူမယ်နော် ဟာ...တကယ် ယူမှာလား... တကယ် ယူမှာ အဖိုး...တွက်ကြည့်ရအောင် (အားလုံး 17,000 Ks ဖိုးရှိတယ်) ရော...အဖိုး 50,000 Ks နော်...ပိုတာ ပြန်မအမ်းနဲ့ ယူလိုက်တောနော် ..
ဟာ...ဝမ်းသာလိုက်တာ...ဆေးဖိုးတွေ ဆိုင်မှာ သွားသွင်းမယ်...ပြီရင် မိသားစုတွက် စားစရာတွေ ဝယ်ပြန်တော့မယ် ။ ကျေးဇူးပါ သားရယ်...တခါမှ ခုလို အကုန်မရောင်းရဖူးဘူး...ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းပါစေ သားရယ်....ဟုတ် အဖိုး အိမ်ပြန်တော့နော်...အဖိုး မိုးရေတွေ ရွဲနေတာ နေမကောင်းဖစ်မယ် ပြန်နားတော့နော်။ အော...ပိုက်ဆံလေး ထိုင်ရေနေပီ...ပျော်နေရှာတဲ့ အဖိုး" ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးဆီကနေ ဆေးတွေအကုန်လုံး ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Source : ArrPuu Tuu's Facebook Acc